एउटा लाइफबोय साबुनको मुल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ ! | साँचो खबर
एउटा लाइफबोय साबुनको मुल्य ३ हजार ८३१ रुपैयाँ !
४ मंसिर, सप्तरी । ‘एउटा लाइफबोय साबुनको मूल्य कति ?’ बिक्रेताहरुका अनुसार ९५ ग्रामको खुद्रा मूल्य ३० रुपैयाँ र १२५ ग्राम तौल भएको साबुनको ३५ रुपैयाँ पर्छ । तर यही साबुनका लागि सप्तरीको एउटा स्थानीय तहले ३ हजार ८३१ रुपैयाँ ४२ पैसाको बिल बनाएको छ । बोदे बर्साइन नगरपालिकाले कोरोना महामारीका समयमा २ करोड २१ लाख ३४ हजार ३ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जसमा स्यानिटाइजर, साबुन, झुल, म्याट्रेस, मास्क, पञ्जा लगायतका सामाग्री खरिद गरिएको छ ।
मूल्य पनि त्यसअनुसार मिल्दैन । नगरपालिकाको हिसाब गडबड साबुनमा मात्र छैन, स्यानिटाइजर लगायतको मुख्यमा पनि छ । खर्च विवरणमा २२ चैतमा ७ लाख ७ हजार १९२ रुपैयाँमा २८०४ पिस स्यानिटाइजर खरिद गरेको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले २८ वैशाखामा ७५ पिस पीपीई गाउन (सिम्पल) किनेको छ, जसको मूल्य २७ लाख ५२ हजार ५०० राखिएको छ । यसहिसावले एक पिस पीपीई सेटको ३६ हजार ७०० रुपैयाँ परेको छ । जुन बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक धेरै हो । एक पिस सर्जिकल मास्कको मुल्य झण्डै ८० रुपैयाँ छ भने पञ्जाको मुल्य ७०० बढी राखिएको छ ।